SAFFRON PEOPLE'S MOVEMENT: မြန်မာနိုင်ငံရှိ တိုင်းရင်းသားအရေး ပဟေဠိပုစ္ဆာ
Wednesday, 26 November 2008 18:57 ဒေးဗစ်စကော့ မက်သီဆင်
မြန်မာနိုင်ငံရှိ တိုင်းရင်းသားများ၏ နိုင်ငံရေး၊ ပဋိပက္ခ ဖြစ်ပွားနေသည့် အခြေအနေ။ အက်ရ်ှလေ ဆောက်သ်၊ Routledge ပုံနှိပ်တိုက်၊ စာမျက်နှာ ၂၇၇. Ethnic Politics in Burma: States of Conflict by Ashley South. Routledge, 2008, P 277